ယူနိုက်တက်: December 2011
ဆိုလာ ကိုစတာ_ သီရိဆွေ (၂၀၁၂)
Ride With Me - Feat- J Me ၊ ဘိုလေး
ဒီနေရာမှာ download ယူပါ
အယ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတစ်ချို့ 
Labels: သီချင်းများ, သီရိဆွေ
Posted by unity 1 comments
ကောင်မလေး Feat. ပိုက်ပိုက်
နှုတ်ဆက်တဲ့စကား Feat. နန်းသူဇာ
အတူတူ Feat. SZ, နန္ဒီ
နေခဲ့တော့ Feat. အိမ့်ချစ်
အသည်သူခိုး Feat. လွှမ်းပိုင်
ကင်မရာဖုံး Feat. ဂျောက်ဂျက်
ဖြစ်ပါစေ Feat. လင်းပင်ဟိန်း
The whole album download..,
ဒီနေရာမှာ dwonload ယူပါ
Labels: သီချင်းများ, ကျော်ထွဋ်ဆွေ
အဖွင့်အမှာစကား - Feat: ရန်ရန်ချမ်း
ရန်မဖြစ်တော့ဘူး - Feat: စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ ဗုံဗုံ
မျက်နှာလွဲ - Feat: ကိကိ
တယ်လီဖုန်း … ကိုင်ပါအုန်း
မဖြစ်သင့်ဘူး … မချစ်သင့်ဘူး - Feat: အိမ့်ချစ်
The whole album download
ဒီနေရာမှာ download ရယူပါ
Labels: ဘန်နီဖြိုး, သီချင်းများ
Folder Protect® 1.9.2
Power protection for your Data-in Use!
Folder Protect isapowerful concept in Data Security. Using Windows Kernel level protection that even works in Safe Mode ensuring complete security of password protected folders, Folder Protect enables you to password protect your folders, files, drives , installed programs, and popular extensions, and lets you set variable access rights. Folder Protect goes beyond normal file locking and encryption by letting you customize your security between making files inaccessible, hidden, delete-proof, or write-protected, with options to set either one of these parameters in conjunction with the other. You can lock, hide, block access, prevent data from being deleted or modified, and mask popular media and document extensions withasingle-click. The program can work in complete stealth mode and you can choose an idle time when the data gets protected automatically.
Best-of-Breed Data Security Features: Folder Protect password-protects your important folders, files, drives, and programs. Folder Protect offers 'Data in Use' security and lets you protect your files by equipping you withacomprehensive set of Data-in-Use protection tools including Write-protect, Delete-protect, Access-protect, and Hide your data. Additional security features include Safe Mode locking, Stealth Mode, Hot keys, and Auto-protection.
Block Access To Files: Folder Protect can easily block access to files, folders, drives and programs you choose. Make your files accessible without giving away any additional rights to it's contents.
Hide Files from Everyone... Except You: Tired of those prying eyes? Simply password-protect folders, files, pictures & videos using Folder Protect's No Visible feature and hide them from all snoopers.
Maximum Data Protection: Folder Protect's write protection is quite unique and first of its kind because it lets other users access the files but still doesn't allow them to make changes to them.
Delete-Proof Your Files: Folder Protect allows you to Delete-proof your important files. Withasingle-click password-protection, you can rest assured that your files are protected even from being accidently deleted.
Platform: Windows7/ Vista / XP (32 / 64-bit) Home page link
ဗုန်းပေါလအော အတ္တတွေကို ကိုင်ဆုပ်လို့
ငါ ဒီကိုရောက်လာတဲ့ ဆာလောင်မှုကလည်း
ရှေ့ တစ်လှမ်းရွယ်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်...။ ။
Premium Clock 2.65+Serial
Computer screen မှာ အမြင်တမျိုးဆန်းသစ်လှပစေတဲ့ premium clock ဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ။ ဒါလေးကို install လုပ်ပြီးလျှင် ကွန်ပြူတာ screen မှာ အထက်ပါပုံတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နာရီပေါ်ထောက်ပြီး skin များစွာ မိမိနှစ်သက်ရာ ပြောင်းလဲလို့လည်းရပါတယ်။ ပုံစံတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ serial key ကိုတော့ Task bar ရှိ Notification Area မှ Down arrow လေးထဲမှ premium clock ဆိုတဲ့ icon ပေါ်မှာ Right click ထောက်လိုက်လျှင် Active ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Active မှာ ကလစ်လိုက်ပြီး serial ထည့် OK လိုက်ရင် full version ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဆင်ပြေပါစေ။
၁။ Media fire
၂။ Mega upload
Posted by United 1 comments
ပေါ့ပါး၍ Virus Security အတွက်စိတ်ချရသောTrend Micro Titanium Internet Security 2012 ကို ကီးနှင့်တကွ တင်ပေးထားပါတယ်။ full version ဖြစ်လို့ စိတ်ချလက်ချ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ အထိ သက်တမ်းရပါတယ်။ အောက်မှာ အင်တာနက် နှေးနေလို့ ဖိုင်ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးဒေါင်းပြီး part 1 ဖိုင်ကိုဖြေလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။ media fire ကနေတင်ပေးထားလို့ အဆင်ပြေစွာ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Mediafire ကနေဒေါင်းရန် part 1 | part2| part3|
တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလိုလျှင် part 1 | part2| part3|
အထဲမှာ ကီးဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ မူရင်းလင့်က ဒီမှာ ပါ။ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကီးဖိုင်နှင့်တကွ ဒီမှာ ကလစ်ပြီးဒေါင်းပါ ဒါရိုက်လင့်တင်ထားပါတယ်။(OR) click here
Labels: စန္ဒီမြင့်လွင်, သီချင်းများ
ဓမ္မဓူတ အရှင်ဆေကိန္ဒ တရားတော်များ စုစည်းမှု
ဓမ္မဓူတ အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ တရားတော်တွေ စုစည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာယူလိုယူများ download ရယူပါခင်ဗျား..
ဒီနေရာမှာ download ရယူပါခင်ဗျား..။
Labels: တရားတော်များ, ဓမ္မဓတ အရှင်ဆေကိန္ဒ
ရှင်ဖုန်း_ကြင်နာသူ ကမ်းမဲ့လက်(new album)
တို့ … စိတ်ပြောင်းရင်
အချစ် = မှားလား
ဒီနေရာမှာ download ရယူပါ။
Labels: ရှင်ဖုန်း, သီချင်းများ
ရှင်သန်နေသူအတွက် - ထူးအယ်လင်း(new album)
ဒီနေရာမှာ download ရယူပါ..။
Labels: ထူးအယ်လင်း, သီချင်းများ
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မီးဘေးအတွက် အလှုငွေများ လက်ခံပေးခြ...